ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအေးချမ်းလာရာမှ.. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Contributors » ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအေးချမ်းလာရာမှ..
Posted by Nu Than on Oct 17, 2012 in Contributors, Creative Writing, Myanma News |9comments
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်ဆူပှူဆန္နပြစေရန်လှုံဆော်နေပါသည်။ တည်ငြိမ်အေးချမ်းလာသော ရခိုင်ဒေသအားဆူပူသွေးဆူဆန္နပြစေရန်နှင့်တနိုင်ငံလုံးဆူပူစေ
ပါသည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရသည် ၄င်းတို့လက်ထက်တွင်မှဆိုရွားသောဘာသာရေးနှိပ်ကွပ်
မှုကိုဆောင်ရွက်ခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။ ယခုအခါတည်ငြိမ်အေးချမ်းလာသောအခြေအနေ များကို
ထပ်မံ့ပြဿနာဖြစ်စေရန်ဆူပူမှုမဖြစ်သေးသော မြို့နယ် များသို့ RNDP အဖွဲ့မှအစွန်းရောက်
မျာကိုစေလွတ်ကာ ဆူပူဆန္နပြစေရန် လှုံဆော်ခဲ့ပါသည်။သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်များမှ ခွင်ြ့ပုချက်မပေးသော်လည်းပြည်နယ်သို့ တင်ပြစေကာတပြည်နယ်လုံးဆန္နပြခိုင်းနေပါသည်။ အချိုဆူပူဖျက်ဆီးလို့သူများသည်လုစု့သည်နှင့်ဘာသာရေးပုတ်ခတ်စော်ကားမှုများကို
ယခုအခါတည်ငြိမ်အေးချမ်းနေသော ပြဿနာလုံဝဖြစ်ပွါးခြင်းမရှိသော ကျောက်ဖြူ၊သံတွဲ
အစရှိသောမြို့များကို ပြဿနာဖြစ်ပွါးစေရန် ဆန္နပြရန် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရမှအထက်အမိန့်
ဆိုကာ ဆန္နပြရန် အားဓမ္မခိုင်းစေ ခဲ့ပါသည်။ရခိုင်ပြည်နယ်သံတွဲမြို့တွင် ၂၁-၁၀-၂၀၁၂
နေတွင်ဆူပူဆန္နပြစေရန် ပြည်နယ်အစိုးရခိုင်းစေခဲ့ပါသည်။ OIC ရုံးမဖွင့်ရန်ဆန္နပြခိုင်းရန်
အကြောင်းပြသော်လည်း ယခု ဗဟိုအစိုးရမှ0ICရုံးမဖွင့်တော့ကြောင်းကြေငြာပြီးသော်လည်း
ရမည်ရှာကာ ပြဿနာဖြစ်စေရန်ဆူပူစေရန်ဆန္နပြခိုင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်များမှအေးချမ်းနေသော မြို့ကလေးအား ပြဿနာမဖြစ်ပွါးစေရန်ခွင်ါပြုချက်မပေးခဲ့သော်လည်းပြည်
ဆောက်ရွက်နေကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ပါသောကြောင့်ဆူပူမှုဖြစ်ပွာနေသော ရခိုင်ဒေသတွင်
ယခုအခါ အဆိုပါအေးချမ်းနေသောမြို့ကလေးကို ကျန်သောရခိုင်ပြည်နယ်များကဲ့သို့ ပြဿနာဖြစ်ပွါးပျက်စီးစေရန် RNDP မှ လူများရောက်ရှိ
ကူညီနိုင်သူများလည်းဆက်လက်ကူညီပေးကြပါ .. . .
ဒီပိုစ်ကိုမပိတ်ပါနှင့် ပေါက်ကရတင်ထားသောစော်ကားသောစာများကိုမပိတ်ဘဲ ဒီအဖြစ်မှန်စာကိုမပိတ်ပါနှင့်။မနေ့ကတစ်ယောက်တင်ထားတာကိုပိတ်လိုက်၍ပြန်ကူးတင်ပြ
၀က်ဘ်ဆိုက်ဒေါင်းသွားပြီး.. ပြန်တက်တာမှ မိနစ်ပိုင်း…
စာတင်သူရဲ့ ဓါတ်ပုံ လိပ်စာနဲ့တကွ တင်ပါခင်ဗျား..
ပစ်စာ၊ တိုင်စာ၊ လှုံ့ဆော်စာ အကုန်ဖျက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း…
စာတလျှောက်လုံး မြို့သူ/ မြို့သားကို ကိုယ်စားပြုရေးထားပြီး သမ္မတကြီးခင်ဗျား ဖြစ်နေတယ် …… ဂယ်ဆို … ပနံသင့်သွားအောင် .. သမ္မတကြီးခင်ဗျား/ရှင့် .. ဖြစ်ရမယ် ထင်တာပါပဲ …….. အဟီးးးးး ဘာရယ်မဟုတ်ဘူး … ဖတ်ပြီး မြင်တာလေးပွားခဲ့တာ …….
အဲဒီလိုပဲ ပစ်စာကို ပစ်စာလို့သဘောမထားနိုင်ပဲ ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကိုရင်းပြီး ပြန်ဆဲနေကြသူတွေကိုလဲ အားနာပါသည်…
အဲဒီအတွက် ပစ်စာကို ဖျက်ပစ်ခြင်းအားလုံးထောက်ခံသလို…
ဘာသာရေးတိုက်ခိုက်မှုသေချာသောပိုစ့်များကိုလဲ ကော်မန့်ပိတ်ခြင်းထက် ဘက်လိုက်မှုမရှိ ဖျက်ပစ်စေလိုပါကြောင်း…
ဟုတ်ပါတယ် မသေချာမရေရာတာဆိုရင် ဖျက်ပစ်လိုက်ပါ.
နောက်ဆုံးမှာကျနော်တို့ရွာဘဲ နာပြီးကျန်ခဲ့ရတာများလို့ပါ ကိုခိုင်ရေ
Contributors Category ထဲကစာတွေကို.. Contributors ဖြစ်တဲ့..ရွာသူား ၂၀၀ခန့်ကသာဖတ်လို့ရပါကြောင်းနဲ့.. .
ဒီစာတွေကို.. မန်းဂဇက်အနေနဲ့.. သမိုင်းအထောက်အထားကျန်စေရန်… သိမ်းထားခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း..
ဆိုတော့ကာ 200 ပြည့်ပုံမရသေး…။ နေ၀န်းနီ စိတ်ကြီးဝင်သွားပြီ….။ ဘာလို့ဆို မန်းဂဇက်ရဲ့ လူ200 စာရင်းထဲမှာ နေ၀န်းနီ ပါနေပုံပဲ….။ ငါကွ…။
ကိုကြောင်ကြီးရေ….။ ကြောင်ပြာဆိုဒ်တော့ မလုပ်ပါနဲ့ဗျာ….။ တိုင်ပတ်ကနေတဲ့ပုံတင်ချင်ရင်တင်လေ…။ ကြွက်ချောက်ရတာပေါ့…….။
အထောက်အထား ကျန်ဂျေးဆို အကျွန်ုပ်ကြောင်ကြီး ကိုယ်တုံးလုံးချွတ် တိုင်ပတ်ကနေတဲ့ပုံ ရသလား၊ ထားပေးမယ်ဆို အခုချက်ခြင်းပို့မယ်… အဲဒီပုံတင်မက ပြာသိုလကြောင်ပွဲတော်မှာ ဦးကြောင်ကြီး မာနထောင်နေပုံပါ (ခရက်ဒစ်တူ ဦးကျောက်ခဲ) ပို့မယ်….။ ဂေဇက်ဆိုက်ကို ကြောင်ပြာဆိုက် ဖြစ်အောင် လုပ်ပစ်မယ်ကွ……။
ကြောင်ကြီးကောင်း ကြောင်မတထောင်တဲ့ဟေ့… ဘွတ် ရွှတ် ဒိုင်း… :harr:
အပြာပုံများအတွက် သိသမျှ တတ်သမျှ ရှိသမျှ စုထားသမျှ လေးများကို
ကျွန်ုပ် မောင်ပေ မှ ဝင်ရောက် ဖြည့်ဆည်းပေးပါမည်